Redmi Note 8 Pro ကို Special Edition အနေနဲ့ထပ်တွေ့ရဦးမှာလား ? — Anycall Mobile
By RKhar M Thant August 10, 20202Mins Read
Redmi ရဲ့ Mid Range Killer တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Redmi Note 8 Pro ကို အားလုံးမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ MediaTek Helio G90T ကိုသုံးထားတဲ့ Note 8 Pro ဟာ 2019 ခုနှစ်ရဲ့ Best Mid Range ဖုန်းဆိုတဲ့ နေရာကို သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ MediaTek SoC တွေလည်း မခေတော့ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ Redmi Note 8 Pro ကို အခုမှာလည်း Xiaomi ရဲ့ 10 နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Special Edition ထပ်ထွက်လာဦးမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ Augest9ရက်နေ့ (မနေ့) ကပဲ Xiaomi ရဲ့ Official Twitter Page ကနေပြီး Redmi Note 8 Pro Special Edition အရောင်ကို tease လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တင်သွားတဲ့ပုံအရတော့ Redmi Note 8 Pro ကို တခြား Color အနေနဲ့ ထပ်ထုတ်လာမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီလို လိမ္မော်ရောင်အရောင်ကို ဒီနှစ်စ January လမှာပဲ China မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Special Edition အနေနဲ့ Global Market ကိုထုတ်ရောင်းမယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Special Edition မှာတော့ Back Cover ကို အရင်က Glossy Glass အစား Frosted Glass ကိုသုံးလာမှာဖြစ်ပြီး ပိုပြီး Premium ဆန်လာမယ်လို့ rumor တစ်ခုကဆိုထားပါသေးတယ်။
Redmi Note 8 Pro ဟာ MediTek G90T ကိုအသုံးပြုပြီး ပထမဆုံးပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ဖုန်းဖြစ်ကာ စစထွက်လာချင်းကတော့ Camera Bug တွေ Heat Issue တွေနဲ့ တော်တော်တော့ ဂွမ်းခဲ့တာပါ။ နောက်မှသာ G90T ရဲ့ Performance နဲ့ ပြန်ပြီးထူထောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က MediaTek ဆိုရင် နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်း နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲထွက် G series တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
Redmi ရဲ့ Note series တွေက သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာတော့ တော်တော်ကို ကြမ်းနိုင်ရမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ series တွေပါ။ Note7series တုန်းကလည်း Note7ဆိုသလို၊ Note 8 Series တုန်းကဆိုလည်း Note 8 ဆိုသလို end user တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Series တွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုလာမယ့် Special Edition မှာလည်း အရင် Note 8 Pro တုန်းကအတိုင်း G90T ကိုပဲသုံးလာမလား ? အခု Note9Series ရဲ့ Snapdragon 720G ကိုပဲ သုံးသွားမလား ? ဆိုတာကတော့ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေမှာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Anycall Mobile ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရော အခု Redmi Note 8 Pro Special Edition ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ? Xiaomi က ဂျင်းထည့်ဖို့ အသစ်တွေအများကြီးထုတ်နေတယ်လို့မြင်မိလား ? အောက်က Comment Box ထဲမှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါဦးဗျို့…
Note 8 ProNote 8 SeriesRedmiSpecial Edition